Akụkọ kacha ọhụrụ banyere Fedalia Ariri si Nigeria & ụwa | TAA
NBC nyere iwu ka Daar Communications kwụsịrị nnyefe nke amaokwu FM na ...
2019: Onye isi obodoeze Ohanaeze kwetara na ọ kwadoro Buhari
Ramadan: Ọnụ ahịa nke nri na-abawanye na Katsina
NIMASA onyeisi Dakuku Peterside flays Gọvanọ na-akwado n'elu allegation nke soot ...
Shkodran Mustafi: Enwere m obi ụtọ na Arsenal
Home Tags Fedalia Ariri
Di na nwunye na-akwa ụra maka ire nwa ọhụrụ maka N400,000
Mgbe izu izu atọ gasịrị, nlekota oru nyocha nke mkpanaka Criminal Investigation and Intelligence Department of the Imo State Police Command nyere iwu ka ha dinaa di na nwunye n'ihi ebubo na ha rere nwa ha nwanyị, Chinacherem, maka N400,000, awa ole na ole mgbe ha gachara.
NBC nyere iwu na Daar Communications kwụsị ịkwụsị nke akara FM na Yola, na-enye ihe
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke mba ahụ, NBC, nyere iwu ka Daar Communications, ndị nwe AIT na RayPower, kwụsịrị ntinye nnwale nke ihe àmà FM na Yola, isi obodo Adamawa.
Onye isi nke Ohanaeze Women Organization ekweghị na nkwupụta a na-ekwu na mgbasa ozi na ọ kwadoro President Muhammadu Buhari maka okwu nke abụọ.
Sevilla's Steven N'Zonzi rịọrọ mgbaghara maka ịgbagha mgbe Copa del Rey meriri
Dibia midfielder Steven N'Zonzi rịọrọ mgbaghara maka oge ọ ga-eji na-eme njem na Madrid mgbe ọnwa 5-0 gafere na Barcelona na Copa del Rey.
Obere izu atọ ka mmalite nke oge ezumike Muslim kwa afọ, ma ọ bụ nke a na-akpọ ya Ramadan, ọnụahịa nke ihe oriri na-arịgo n'obodo ukwu Katsina.
Onye isi NIMASA Dakuku Peterside flays Gọvanọ nwere ike ikwu okwu banyere igbu egbugbu, nchịkọta ndị nhoputa
Onye isi osote Director of Administration and Safety Agency (NIMASA), Dr Dakuku Peterside, abanyela na Gọvanọ Rivers State, Nyesom Wike maka ebubo na gọọmenti etiti gọọmentị na-eme ka steeti ahụ dị ala ma na-echekwa ịkwado nhoputa ntuli aka niile nke 2019. ihu ọma nke ndị niile na-enwe ọganihu (APC).
Turkey na-etinye ọnọdụ mberede maka ọnwa atọ ọzọ
Ndi nzuko omeiwu nke Turkey kwadoro ukporo iji kwalite onodu mberede maka onwa ozo ato, otu ulo oru mgbasaozi nke ala.
Onye odeakwụkwọ Gọọmenti Federation, Boss Mustapha, kwuru na e gburu ndị 257 n'ọgụ n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ na ọ dịkarịa ala ala asaa na afọ a.
Ndị APC na-agba ọsọ na-agbapụta Repjabiamila maka ịmeghachi ntuli aka
Ndị isi na-aga n'ihu na ndị nọ na Lagos State bụ ndị na-achọsi ike ịnọchite anya Surulere Federal Constituency m nọ n'ụlọ ndị nnochite anya gosipụtara mmegide ha na nchọta nhoputa ndi ochichi ndi isi nke House, Mr. Femi Gbajabiamila, ndi ha kwuru na ha ejewo ozi okwu nke anọ ama.
RB Leipzig na Celtic na-eche Arthur Okonkwo, 16, n'ihi na ọ ka na-edebanye aha na Arsenal.
Onye na-emepụta Swedish na DJ Avicii, bụ ezigbo aha Tim Bergling, nwụrụ Friday, April 20th, 2018, dị ka onye mgbasaozi ya bụ Diana Baron kwadoro. Ọnwụ ya na-abịa nanị ụbọchị ole na ole 2017 EP, Avíci (01), a họpụtara maka onyinye onyinye Billboard maka agba egwú / ọkpọkọ egwu.